Maxay tahay caqabadda ay la kulantay gabadha Soomaalida ah ee ka mid noqotay baarlamaanka Sweden? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxay tahay caqabadda ay la kulantay gabadha Soomaalida ah ee ka mid...
Layla Cali Cilmi waa xildhibaanka kaliya ee Madow oo xijaaban kana tirsan baarlamaanka Sweden.
Sweden (Halqaran.com) – Layla Cali Cilmi, waxay baarlamaanka Sweden ka mid noqotay sannadkii 2018kii, inkastoo ay wajeheysay caqabado adag oo kaga imaanaya “dadka miyalka adag”, sida ay sheegtay.
Maxaa ku dhiirageliyay siyaasadda?
Layla Cali Cilmi waa xildhibaanka kaliya